Ukuqinisa ezokuphepha kwewebhsayithi lena, iwebhsayithi lena ibhalise kwaye ihambisana nezinyathelo zokuvolontiya ngokuzimela eziqukethwe kuMthetho weElectronic Communications kanye neTransactions Act 25 yango2002. Angekhe sidalule incazelo engomuntu naphansi kwasiphi isimo esingachaziwe kwinqubomgomo.
"iwebhsayithi lena" https://www.isolezwe.co.za" umnikazi webhsayithi" kanye "nathi" kusho Independent Media (Pty) Ltd osebenzisa iwebhsayithi" kusho noma nguwuphi umuntu osebenzisa ingxenye yewebhsayith lena
1. Amafomu eNqubomgomo Ezimele ayingxanye yeMigomo nemibandela okusetshenziswa kwewebhsayith lena. Uma ngabe ungavumelani naleNqubomgomo kumele ungayisebenzisi iwebhsayithi.
2. Umnikazi webhsayithi unamalungelo aphelele okulungisa nokucibiyela imigomo nemibandela yeNqubomgomo OZimele nganasiphi isikhathi Ngesikahthi umnikazi webhsayithi ezama ukushinsha iflegi kuleNqubomgomo nnangenkathi isetshenziswa isala ngaso sonke isikhathi ingumthwalo oqinisekisa ukuthi abantu abasebenzisa iwebhsayithi banolwazi lwemiNqubomgomo yokwenzekayo noma yinini befinyelela kwiwebhsayithi lena, futhi beqhuba nokusebenzisa iwebhsayithi emva kokulungiswa nokucibiyeliwa nokwamukelwa ngabasebenzisa iwebhsayithi kweNqubomgomo njengoko icibiyeliwe.
Ukuqoqa imininingwane ngencazelo yomuntu
3. . Lapho kufakwa incazelo ymuntu (efana negama, isibongo, ikheli, inombolo yocingo, i-imeyili nekhadi lezikweletu) ifakwa kwisayithi ngabasebenzisa iwebhayithi, isibonelo ngokuthumela nge-imeyili noma ukufayila kwiinkundla ezidingakalayo, ezi zinyathelo zilandelayo nezibhekwa ekusetshenzisweni kwencazelo:
Iwebhsayithi lena iqoqa, ize iqhube ibuye igcine incazelo ngomuntu kuphela uma kunesidiongo saloko lapho osebenziswa iwebhsayithi enikezela ngenkonzo nezinsiza ezithize. Eyona njongo ihlosiwe ngencazelo eqoqiwe kucaciswa obala yizizathu edingakal ngaphansi kwazo
Iwebhsayithi lenaayikhoni ukusebenzisa incazelo yomuntu ngamunye ngezinhloso ezingaphandleni kokusebenza kahle kwezinkonzo, kubandakanya iwebhsayithi nenkonzo ezinikezelwa ngumuntu mumbi, ngaphandle kokuthola isivumelwano ngokusebenzisa incazelo leyo ngaphandle kokuthi lokho kufunwa ngumthetho.
Iwebhsayithi lena ikhipha imininingwane yokuqoshiwe nencazelo yomuntu ngamunye ngenjongo ethize ngesikhathi esithize mhlawumbe esingadlulile enyakeni omunye kusukela ngesikhathi igcina ukusetshenziswa.
Iwebhsayithi lena ayingekhe idalule noma iyiphi incazelo ngomuntu ngaphandleni kokuthi kunesivumelwano esibhaliwe esitholakele ngaphambilini kokusebenzisa iwebhsayithi lena unesivumelwano esibhaliwe noma iwebhsayithi kudingeka noma kuvumelwa ngenxeni yezomthetho
Mangabe incazelo ikhisiwe ngesivumelwano sosebenzisa iwebhsayithi lena umuntu mumbi ngezizathu ezithile nangomhla othize ngesikhathi esithize ngonyaka.
Iwebhsayithi lena izoshabalalisa noma icime nayiphi incazelo yomuntu ngamunye engaphansi kolawulo nethi ibe yeqinisiwe.
4. Incazelo eqoqiwe ngabasebenzisa iwebhsayithi lena ngokusetshenziswa kwewebhsayithi njengempahla yomnikazi webhsayithi.
5. Unikazi webhsayithi angagcina ubunikazi belungelo lokubhalwe kwimininigwane yencazelo egciniwe yomuntu.
6. Akukonancazelo yekhadi lesikweletu egcinwa noma ekhishwa ngumnikazi webhsayithi.
7. Qaphela ukuthi, njengoko kuvumelwe nguMthetho we-ECT, iwebsayithi lena ingasetshenziselwa ukuqoqa incazelo yomuntu ngamunye uma kudingeka kwakhiwe iprofayile ngenjongo yamanani kanye nokuhweba ngeziprofayile. Akunacazelo equkethiwe ngala maprofayile noma amanani angaxhunyaniswa nosebenzisa iwebhsayithi.
Ukuqoqa imininingwane yabafihle amagama
8. Ukuze kunikezwe inkonzo engcono nesebnza kahle, iwebhsayithi lena isengasebenzisa izinga lobuchwephesha ukuqoqa incazelo ngokusetshenziswa kwesayithi. Lobu buchwephesha abukhoni oyedwa osebenzisa iwebhsayithi lena kodwa ukuqoqa amanani nokubonisa amanani aqoqiweukwazisa labo basebenzisa .
9. Iwebhsayithi lena isebenzisa iikhuki. Ikhuki lifayile elincane elibekwa kwihard drive yosebenzisa iwebhsayithi ukuze agcine imininingwane yalabo bantu basebenzisa iwebhsayithi lena ukuxhumana.
Ikhuki zewebsayithi lena zivumela umnikazi webhsayithi alungelanise umkhangiso nezinye inonzo zibonise lokho akudingayo. Iwebhsayithi isenokusebenzisa umuntu mumbi ukusuka kwiseva nenjongo.
Iikhuki azikhoni ukutshengisa ukuthi zisetshenziswa ngubani kepha ziyasetshenziswa ukuqoqa amanani ahambelna nokusetshenziswa kwazo ngokwenkonzo enikeziwe noma ukunikezela ngencazelo endlela asebenza ngayo kwiwebhsaythi lena.
10. Mangabe osebenzisa iwebhsayithi lena akathandi ukusebenzisa iikhuki noma ukuzilungisela uma esebenzisa iwebhsayithi kulula ukushinsha indlela esebenza ngayo ibrawuza. Qaphela ukuthi, ukuba lokhu kwenziwe ezinye izinkonzo ezikhethekile kwiwebhsayith lena zinsengatholakali.
Ukufikelela kwiminingwane yomuntu ngamunye
11. Lapho oebenzisa iwebhsayithi lena ekholwa ukuthi imininingwane yomuntu ngamunye egcinwe ngumnikazi webhsayithi iphelelwe yisikhathi noma ingachanekile nemininingwane kudingeka ilungisiwe –ungaxhumana nathi .nasiphi na isicelo sokulungisa imininingwane kumele kuqondiswe kwimininingwane engachanekile nokulungiswa okuphakanyisiwe kumele kube nezizathu zokufaka isicelo.
12. Abasebenzisa iwebhsayithi nokufinyelela noma kuyiphi imininingwane ehambisana egcinwengumnikazi webhsayithi njengoko kubonisiwe Ukukhuthaza noKufinyelela kuMthethp weNcazelo No 2 ka2000 (“PAIA”) lapho ukufinyelela okunjalo kudingeka khona ukusebenzisa kanye/noma ukuphepha kwamalungelo abo. Ikopi yePAIA ingatholakala lapha.
13. Incazelo ethe xhaxhe ngePROATIA nenqubo elandelwayo ukufaka izicelo zokufinyelela kwiminingwane yomuntu ngamunye atholakala kumnikazi webhsayithi nokuKhuthaza Ukufinyelela kwiManuwali yeNcazelo evela kwiwebhsayithi yeKomishoni Yamalungelo Abantu – www.hrc.org.za.
Ukuxhumana namanye amawebhsayithi
14. WAsinamandla okulawula futhi asiwkazi ukutha isibopho sendlela yokusetshenziswa okuseceleni noma okuyimfihlo kwesayithi yomuntu wesithathu lapho kunikezwe izindlela zokuxhumana futhi sicebisa ukuthi umuntu ahlaziye inqubomgomo eyimfihlo yesayithi ngaphambili kokuthi aqhubeke nokulisebenzisa any site you visit before using it further.
15. Noma kuthathwa izinyathelo ukuqinisa ezokuphepha nobuqotho bencazelo efakwa kuleli sayithi, ngekhe le webhsayithi ibe nesibophelo ngokulahlekelwa noma ukonakaliswa ngabayisebenzisayo noma ngezizathu zokuthi labo balisebenzisayo bayimbangela yokukhishwa kwezindaba ezingafanele ngengozi noma kungahlosiwe ngosebenzela umphathi webhsayithi noma umuntu ongowesithathu.
16. Labo basebenzisa noma babhalisile bavinjiwe ekuthenini bakhiphe amagama abawasebenzisayo noma oopasiwedi kunoma ngubani.
17. Silubeka phambili ukukhuseleko nezimfihlo zezingane ezisebenzisa le webhsayithi kepha kuphela kungumsebenzi wabazali nabanakekela izingane ukuqinisekisa ukuthi azibuki okungafanele noma azibuki indlela ezingashilo zokuziphatha.
18. Mangabe unemibuzo ngenqubomgom ezimele usengaxumana nathi
Usuku lokugcina ukuhlaziya 22 March 2017